Sheekh Mukhtaar Roobow ’oo cuntada ka sooman’ muddo saddex maalin ah - Caasimada Online
Home Warar Sheekh Mukhtaar Roobow ’oo cuntada ka sooman’ muddo saddex maalin ah
Sheekh Mukhtaar Roobow ’oo cuntada ka sooman’ muddo saddex maalin ah
Muqdisho (Caasimadda Online) – Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa muddo saddex maalmood ah ka sooman cuntada, sida ay sheegeen ehelladiisa iyo xuno ku dhow.
Cunto ka soomidda Roobow ayaa waxaa Caasimada Online u sheegay xubno ka tirsan Xisbiga Amniga iyo Cadaaladda oo ee hoggaamiyo Abuu Mansuur.
Xubno ka tirsan Villa Somalia oo Caasimada Online ay xiriir la sameysay way beeniyeen in Roobow uu cuntada ka soomay.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysatay inaan lasii deyneyn Mukhtaar Roobow balse ay xubnaha IGAD kala shaqeeneyso bixinta diyada dadkii la laayey, taasoo keentay inuu cuntada ka soomo Roomow muddo saddex maalin ah, sida loo sheegay Caasimadda Online.
Wixii warar ah ee kusoo kordha arrintaan kala soco Caasimadda Online, Insha Allah.